Daawo GDPR? - Suuqyada muusikada oo bilaash ah
HomeSu'aalWaa maxay GDPR?
Aragtida 3.51K 18.5.2018
Mawduuca mawduucyada iyo ujeedooyinka - Samee shuruuc ku saabsan ilaalinta shakhsiyaadka marka la eego hirgelinta xogta shakhsi ahaaneed iyo xeerarka dhaqdhaqaaqa xogta shakhsi ahaaneed. Nidaamku wuxuu ilaaliyaa xuquuqda iyo xorriyaadka asaasiga ah ee shaqsiyaadka diiradda saaraya xaq u lahaanshaha ilaalinta xogta shakhsi ahaaneed. Dhaqdhaqaaqa xorta ah ee xogta shakhsiyeed ee Midowga Yurub maaha mid xadidan ama mamnuuc ah ilaalinta shakhsiyaadka marka loo eego hirgelinta xogta shakhsiyeed.
Waxyaabaha loo baahdo - Nidaamku wuxuu khuseeyaa farsamaynta automated ee xogta shakhsiyeed iyo farsamooyinka non-automated ee macluumaadka shakhsiga ee ku jira diiwaanka ama kuwa la duubo. Xeerarku ma khuseeyo hawlgalka xogta shakhsi ahaaneed:
Xogta Shakhsiyadeed - Xeer-maamuleedka wuxuu naqshadeeynayaa oo kordhinayaa baaxadda iyo qeexidda xogta shakhsi ahaaneed. Macluumaadka shakhsiyeed waa macluumaad kasta oo ku saabsan qof dabiici ah oo la aqoonsaday ama la aqoonsan karo. Sidaa darteed xogta shakhsiga ah waa Data on hay'ad sharci ah tusaale ahaan. (shaqaalaha ay mar hore laakiin haa tahay), xogta ku saabsan dadka dhintay, ma aha in macluumaadka aan qof gaar ah loo aqoonsado (tusaale ahaan. Kaliya magac caadi ah oo la odhan) iyo xogta shakhsiyeed aan xog qarsoodi ah, sidaas darteed kuwa asal ahaan ka soo baxay aqoonsiga qofka laakiin laga saaray buugyarahan. Marka loo eego dhaqanka lid ku ah hore in Directive ee u soocay xogta shakhsiga ah iyo cinwaanada IP firfircoon iyo aqoonsiyada kale dalwaddii.
Waajibaadka - Nidaamku wuxuu ku xiran yahay dhammaantiis wuxuuna si toos ah ugu adeegsan karaa dhammaan Dalalka xubinta ka ah.
Mawduuca - Xeerku wuxuu qeexayaa mabaadi'da farsamaynta xogta shakhsi ahaaneed iyo shuruudaha sharciga ah ee wax qabadkooda. Waxa kale oo ay xakameysaa shuruudaha muujinta ogolaansho la siiyey falanqaynta xogta iyo bixinta macluumaadka iyo helitaanka xogta shakhsi ahaaneed.
Xuquuqda la xushay ee mawduuca macluumaadka - Intaas waxaa dheer, mawduuca xogta wuxuu leeyahay xuquuqaha soo socda:
GDPR ee Jamhuuriyadda Czech - Sida laga soo xigtay natiijooyinkii Rugta Ganacsiga, dhamaadkii sanadka, 2017 diyaar uma ahayn ganacsatada GDPR, qaar ka mid ah waajibaadyada cusub ee aagga ilaalinta xogta shakhsiyeed lama aqoon. Hirgelinta GDPR waa in aysan qaadan wax ka badan bil gudaheeda mulkiilayaasha ganacsiga.